NSSA | Resource
National Skills Standards Authority
မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု "စံ" သတ်မှတ် ပြဋ္ဌာန်းရေး အဖွဲ့
သတင်း နှင့် မီဒီယာ | လမ်းညွှန်မြေပုံ | ဆက်သွယ်ရန်
English | Myanmar
Vision, Mission, Objectives & Policy National Skill Qualification Framework NSSA Organizational Structure NSSA Board Members & Committees NSSA Programs & Services Technical Offices & their tasks NSSA'S Background (in brief) Cooperation ASEAN'S Integration Initiatives
Assessee/Candidate Information Accredited Assessment Center Information Accredited Assessor Information Accredited Training Center Information Test Item Database Occupational Related Video Archives Glossary of Terms Studies & Reports Labour Exchange Offices (LEO) Employment Agencies List Job Fairs & Job Search
Skills Certificate Holders Accredited Assessment Centers Accredited NOCS based Courses Accredited Assessors
National Occupational Competency Standards (NOCS) Assessor Manuals Assessee/Candidate Manuals Guidelines Handbooks Related Policies & legislations Downloadable NOCS & Manuals
Applicant Criteria Applicant Form Applicant Procedure & Required Documents
ပြည်နယ် / တိုင်းဒေသကြီး
ကချင်ပြည်နယ် ကယားပြည်နယ် ကရင်ပြည်နယ် ချင်းပြည်နယ် မွန်ပြည်နယ် ရခိုင်ပြည်နယ် ရှမ်းပြည်နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်း တနင်္သာရီတိုင်း နေပြည်တော် ပဲခူးတိုင်း မကွေးတိုင်း မန္တလေးတိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဧရာ၀တီတိုင်း
သတင်း အချက်အလက်များ ကြေညာချက်များ လှုပ်ရှားမှု ပွဲများ ဓါတ်ပုံများ စုစည်းရာ ဗီဒီယို archive များ
ပင်မ စာမျက်နှာ > ဥပဒေ၊လမ်းညွှန်ချက်နှင့်လက်စွဲများ
ဤစာမျက်နှာတွင် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အလိုက် ကျွမ်းကျင်မှု စံသတ်မှတ်ချက်များ၏ အချက်အလက် အသေးစိတ်ကို စိစစ်ရှာဖွေ၍ Download ရယူနိုင်ပါသည်။
In this page, detailed information of the National Occupational Competency Standard can be searched and downloaded here.
ဤစာမျက်နှာတွင် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အလိုက် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သူများအတွက် လက်စွဲများ၏ အချက်အလက် အသေးစိတ်ကို စိစစ်ရှာဖွေ၍ Download ရယူနိုင်ပါသည်။
In this page, detailed information of the Manuals for Assessor by Occupation can be searched and downloaded here.
ဤစာမျက်နှာတွင် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အလိုက် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခံယူလိုသူများအတွက် လက်စွဲများ၏ အချက်အလက် အသေးစိတ်ကို စိစစ်ရှာဖွေ၍ Download ရယူနိုင်ပါသည်။
In this page, detailed information of the Manuals for Candidate by Occupation can be searched and downloaded here.
ဤစာမျက်နှာတွင် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အလိုက် ကျွမ်းကျင်မှု စံသတ်မှတ်ချက်များ၏ အချက်အလက် အသေးစိတ်နှင့် Manual များကိုစိစစ်ရှာဖွေ၍ Download ရယူနိုင်ပါသည်။
လုပ်ငန်းကဏ္ဍ သတ္တုနှင့် အင်ဂျင်နီယာ ဆောက်လုပ်ရေး စိုက်ပျိုးရေး လျှပ်စစ် အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လုပ်မှု ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှု စီးပွားရေးနှင့် ဝန်ဆောင်မှု သစ်လုပ်ငန်း သတ္တုတွင်း ပို့ဆောင်ရေး ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု ရေနံနှင့်သဘာ၀ဓါတ်ငွေ့ မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်း လူမှုဝန်ထမ်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း IT အခြား
Type of Doc
National Skills Standards Authority (NSSA) commits to develop the National Occupational Competency Standards (NOCS), the competency assessment process and training programs, in order to develop the competent workforce to be comparable to the best in region and practices inasustainable manner with inclusiveness of all concerned interested parties at all levels.
+95 67 430276
National Skills Standards Authority (NSSA) © 2022 All rights reserved.